Nuxurka Warbixintii uu baarlamaanka Midowga Yurub Kasoo saaray Soomaaliya – Kalfadhi
Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa ansixiyey go’aan ku qotoma arrimaha Soomaaliya laga billaabo xaaladda amni, saameynta faragelinta shisheeye, xuquuqda aadanaha, urrurada shaqaalaha Soomaaliyeed, saxaafadda, howlgalka Amisom, doorashooyinka, cadaaladda, dastuurka iyo xasilloonida siyaasadeed.
Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa warbixintiisa ku dhaliilay Imaaraadka Carabta falalka aargoosiga uu Baarlamaanka Midawga Yurub ku tilmaamay ee uu ku hayo Soomaaliya kaddib go’aankeedii dhexdhexaadnimada ee la xariiray khilaafka khaliijka.
Qaraar uu ansixiyay baarlamaanka xaruntiisu tahay Belgiumka ayaa lagu sheegay in Soomaaliya dooratay inay dhexdhexaad ka noqoto muranka khaliijka ee socda, hase ahaatee Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ay ka jarteen taageero joogto ahayd oo ay siin jireen Soomaaliya si loogu ciqaabo.
“Soomaaliya waxay doorbidday inay dhexdhexaad noqoto laakiin iyada oo laga aargoosanayo Sacuudiga iyo Imaaraadka waxay ka jarteen kaalmadii joogtada ahayd” sidaasi waxaa lagu yiri qaraarkii baarlamaanka Yurub.
Baarlamaanka Midowga Yurub waxa uu intaa raaciyay in kaalmada la jaray ay cuuryaaminayso awooddii dowladda ee bixinta mushaaraadka ciidanka ammaanka.
Waxa uu ugu baaqay, isaga oo qaba walaac weyn oo la xiriira danaha shisheeye ee is-haya, Imaaraadka Carabta inuu hakiyo dhammaan falalka xasillooni darrida ku keenaya Soomaaliya islamarkaana ilaaliyo madaxbannaanida dalka.
Go’aankii baarlamaanka Midowga Yurub waxaa lagu xusay in xaaladda siyaasadeed ee dalka aysan xasilloneyn islamarkaana dowladnimadu ay liidato iyada oo horumarka laga sameynayo cadaaladda iyo amniga ay gaabis yihiin, halka hay’adda daah-furnaanta caalamiga ah ee Transparency International ay Soomaaliya ku tilmaamtay dalka ugu musuqa badan caalamka.
Baarlamaanka Midowga Yurub wuxuu soo dhaweeyay guddiga madaxa bannaaan ee xuquuqda aadanaha. Waxa uu baarlamaanku muujiyay sida uu uga walaacsan yahay xadgudubyada xuquuqda aadanaha sida dilalka, kufsiga, xarigga aan loo meel dayin, jirdilka iyo afduubka.
Go’aanka la meel mariyay waxa uu kula talinayaa dowladda iyo Midowga Yurub in la hormariyo aqoonta farsamo ee xarunta dambi baarista Soomaaliya ee CID-da.
Dowladda Soomaaliya waxaaa lagu ammaanay hannaanka dib u eegista dastuurka kadib shirkii seddexda maalin socday bishii Meey ee sanadkan. Waxaa lagu boorriyay dowladda inay ilaaliso sharciga islamarkaana dhameystirto qorshaha PCVE ee lagula dagaalamayo xagjirnimada qeybna ka ah hannaanka CAS ee AMISOM taageerto.
Ugu dambeyn qaraarkan ayaa la sheegay in loo gudbin doono dhammaan hay’adaha kala duwan ee Yurub, waxaa intaa raacsan oo loo diri doonnaa Midowga Afrika, xoghayaha Qaramada Midoobay , golaha xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay, madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Ra'iisul wasaare Kheyre oo xilka ka qaaaday Wasiirkii Owqaafta & Arrimaha Diinta Soomaaliya